Sei Vanhu Vachigaro cheWiricheya Vakapfeka Shangu
Ini ndinoda vanosetsa seshamwari, vanoita kunge vane rima divi randinogona kuenderana naro. Vamwe vanhu vanotaura kuti vanosetsa vanosetsa vakaora mwoyo uye vane hurema hunochinja hupenyu, ndinogona kuwirirana navo zviri nyore. Asi kana ukatandara nevatambi kwenguva yakakwana, unozogumbuka pane imwe nguva uye izvi zvakaitika kwandiri apo shamwari yangu yemudhidhi Joey anoseka nezvekuunganidza kwangu shangu.
Ndinoda shangu dzangu uye dzakandibatsira munguva dzangu dzerima pandakatanga kukuvara. Kupfeka bhutsu dzinoyevedza kwakandibatsira "kudzosa" makumbo angu kunyangwe ndakanga ndisisakwanise kufamba. Pa5 '10' nemakumbo akareba zvakasununguka, zvairwadza kuziva kuti handichakwanise kuratidza makumbo angu zvekare.
Kupfeka Zvitsitsinho paWheelchair
Nekudaro, neakanaka mapara ezvitsitsinho makumbo ako achiri kutaridzika kunge akanaka kugara sezvavaizomira. Iwe uchiri kuwana iyo arch uye seksikä kutarisa iyo vakadzi vane fashoni vanovavarira. Hapana chavanoitira chako chigaro kana wakagara asi vanoita kuti makumbo ako aonekwe akanaka.
Kuziva shangu kwakachinja nyika yangu uye ini zvino ndaive nemikana isingaperi. Bhutsu dzakandibatsira kuti ndinzwe ndakanaka zvakare. Makore gumi uye ini ndine kabhodhi rakazara neshangu - bhutsu, shangu dzakashongedzwa, zvitsitsinho zvepachikuva, bhutsu, Uggs, chidya chakakwirira bhutsu dzakasviba zvitsitsinho nezvimwe zvakawanda. Muunganidzwa wangu waive wakanaka zvisinei Joe aive nemafungiro anonakidza pamusoro pazvo.
Fashoni haina Kurasika paWheelchair Users
Rimwe zuva akandibvunza, "Sei uchisunga shangu dzako?" Chaizvoizvo nei kupfeka shangu zvachose? Hazvina kuita sekunge iwe uri kufamba chero nzira! Zvakanaka ipapo Joe akabva amira kuseka!
Akanga asinganyatsooni chikonzero chacho here? Vakanga vane fashoni, vanoita kuti tsoka dzako dzive dzakanaka. Vanopedzisa kuungana kwako, ivo ndivo icing pakiki.
Ndakamuudza ndakadzikama kuti shangu dzaishamisa kunyangwe ndikatadza kufamba, asi handifanirwe kuzvisunga zvakasimba! Aive asingazive zvachose kuti masaizi anogona kuita kuti tsoka dzako dzikombe zvisina basa uye panoenda shangu dzako. Vanogona kudonha zviri nyore kana vachiendeswa zvakare. Saka vachiri kufanira kusunga chero iwe wakaremara.
Handifungi kuti tsananguro yangu yakanyura maari uye pamwe akaenda achizviudza kuti vanhu vari pawiricheya havadi shangu, asi ndinofara kuti ndakazvidzivirira. Saka nguva inotevera yaunoona mumwe munhu ari muwiricheya mudhipatimendi reshangu iwe unonzwisisa kudiwa kwavo shangu. Ndinofunga yave nguva yekuti ndiende kunotenga shangu zvakare munguva pfupi iri kutevera. 🙂